Ijaarsa manneen waliinii wiirtuu Boolee Bulbulaatti aragmu gartokkeen
Ijaarsa manneen waliinii wiirtuu Boolee Bulbulaatti aragmu gartokkeen Featured
Dhimmi mana jireenyaa ammallee xiyyeeffannaa fedha
Bara darbe mootummaan mataduree, “Manni jireenya koo” jedhuun waltajjii hawaasaa bal'inaan adeemsisaa kan ture yoo ta'u, sagantaalee misooma manneenii biyyattiin hordofturratti furmaatasaa waliin bal'inaan mari'atameera.
Kanarraa ka'uun baroota KGT 2fa keessatti manneen jireenya waliinii miliyoona 2.4 ijaaruuf karoorfamuun kan ibsame yoo ta'u, kanneen keessaas miliyoonni 1.7 baadiyyaatti kumni 750 ammoo Finfinneetti hojiirra oola.
Karooricha milkeessuuf aadaa qusannoo lammiilee fooyyessuufi dandeettii kontiraaktarootaa guddisuufillee waliigalteerra gahamee ture.
Baranas marii walfakkaatuun Ministeerri Misooma magaalotaafi manneenii Amajjii 19 hanga 20 bara 2009 waltajjii Finfinneetti qopheessuun raawwii hojiisaa ji'a jahaa qorateera.
Haaluma kanaan Finfinneetti manneen abbaa 20/80fi 40/60 ijaaraamaa jiran daran gadaanaa ta'uun eerameera. Kanaafis akka sababaatti kan ka'u hojmaatni haaraan Baankii Daldalaa Itoophiyaatiin eegalamuun ijaarsi manneenii duubatti akka harkifatu taasisuusaati ministeerichi kan eere.
Qaamoleen dhimmi ilaallatus bakka lammiileen sababa hanqina mana jireenyaatiin dararfamuurra darbanii yaaddoo xinsammuuf saaxilamaa jiranitti maal na dhibeen bira darbuun fudhatama kan hinqabne ta'uu hirmaatotni waltajjichaa nikaasu.
Rakkoo hamaa kana furuuf kurmaana lamaan darban keessa wiirtuu Boolee Bulbulaa lamarratti, Boolee Bashaalleefi Hayaatitti manneen waliinii ijaaramaa jiran kuma 17fi 50 ta'uun yoo ibsamu, hojiinsaanii giddugaleessaan %34.6 irra akka jiraniidha ministirri ministeerichaa, Doktar Anbaachoo Mokonnoon kan ibsan.
Ijaarsa manneen waliinii abbaa 20/80n bara 2006 eegalaman kuma 52fi 245 yoo ta'u, ijaarsisaanii %52.74 gahuusaaniis ni eeru. Ta'us, dhiyeessa manneenii dabaluun fedhii lammiilee guutuuf karoorri yoo qabameyyuu waggoota shanan dhufan keessatti kan ijaaraman karooraa gadi ta'uu ministiri ni ibsu.
Sochii hanga ammaatti gama kanaan taasifameen Finfinnee qofatti manneen waliinii kumni 300 ol ijaaramuun fayyadamtootaaf kan dabarfaman yoo ta'u, naannoleettis hojjetamaa jiraachuu Doktar Anbaachoon ni addeessu.
Sagantaaleen misooma manneen waliinii rakkoo mana jireenyaa lammiilee hundeerraa furuuf mootummaan kan karoorfame ta'ullee raawwii hanga ammaatti jiruun oggaa ilaalamu gadaanaa ta'uu nihubatama.
Keessumaa Finfinneetti ummanni maallaqasaa qusachuun mana jireenyaa hinarganne baay'eedha. Kanaafuu, qaamoleen dhimmichi ilaallatu marti akkaataa karoora qabameen qindoominaan ijaarsa manneenii jalqabamanii xumuruun fayyadamtootaaf dabarsuu qabu.
Torban kana/This_Week 7202
Guyyaa mara/All_Days 1291713